China Bronze ANSI 150LBS Flanged Globe Valve BRZ-GL-03 DEYE
I-Bronze ANSI 150LBS Flanged Globe Valve BRZ-GL-03
Uchungechunge No.: BRZ-GL-03
I-China Bronze Valve Manufacturer DEYE Inikela nge-Aluminium Bronze gunmetal Globe valve yephrojekthi yamanzi olwandle, i-AP600 / ANSI B16.34, 3 Inch, Class 150, RF End, Bolted Bonnet, ASME B16.10, -40 ℃ ~ + 250 ℃.
I-Bronze Globe valve
Umklamo ojwayelekile: API 600.API6D ANSI B16.34
I-BB iboshwe i-Bonnet Globe Valve
Ngaphandle kwesikulufa nejoka O s & Y
Izinto zomzimba: I-Bronze, i-C95800
Ububanzi bokuqanjwa: 3 ”
Qeda uxhumano: RF. UFlange
Ukushisa okusebenzayo: -40℃~ + 250℃.
Kutholakala Izinto Zomzimba: I-Bronze B62 B61 C83600 C84400 C95800
Usayizi Womkhiqizo: 1-1 / 2 ″ -16, DN40-DN400
Ingcindezi Ibanga: 150LBS, 300LBS, PN6-PN50
Ukuxhumana okungakhethwa: i-flange iphela ngokuvumelana ne-ASME B16.5
Ukuphela kwe-Butt-welding kuvumelana ne-ASME B 16.25
Imikhawulo yokushisela isokhethi ihambisana ne-ASME B 16.11
Imikhawulo ehlanganisiwe ihambisana ne-ASME B1.20.1
Amanzi olwandle, olwandle, umkhakha wokwakha imikhumbi.
Langaphambilini I-Bronze 150LBS Swing Check Valve yolwandle proejct (BRZ-CV-04)
Olandelayo: I-API yethusi ye-bronze API 150LBS ene-NPT (BRZ-GV-02T)
Aluminium ithusi -AL-BRZ
Okuqukethwe kwe-aluminium ngokuvamile akudluli ku-11.5%, futhi kwesinye isikhathi amanani afanele wensimbi, i-nickel, i-manganese nezinye izinto ayengezwa ukwenza ngcono ukusebenza. I-Aluminium bronze ingaqiniswa ngokwelashwa kokushisa, amandla ayo aphakeme kune-tin bronze, futhi ukumelana kwayo ne-oxidation ephezulu nakho kungcono.
Inamandla amakhulu nokuqina kokugqoka okuhle. Isetshenziselwa izikulufo zamandla aphakeme, amantongomane, imikhono yethusi, izindandatho zokufaka uphawu, kanye nezingxenye ezingamelana nokugqoka. Isici esivelele kunazo zonke ukumelana nokugqoka okuhle.
I-Aluminium bronze equkethe i-iron ne-manganese inamandla amakhulu futhi ifaka ukumelana. Ingakhuphula ubulukhuni ngemuva kokucima nokushisa. It has okuhle lokushisa eliphezulu ukugqwala ukumelana kanye namachibi ukumelana. Kuyinto ukumelana nokugqwala emkhathini, amanzi ahlanzekile namanzi olwandle Kuhle kakhulu, ukwenziwa kwemishini kwamukelekile, i-welding ayilula ukubopha, ukucindezelwa okuhle kokushisa kusesimweni esishisayo.
amanzi olwandle, ukwakha umkhumbi, oLwandle
Cooper Intulo ibhonethi Globe Valve BRZ-GL-T-02
Cryogenic yethusi esangweni valve nge stem enwetshiwe ...
Kokuzihlanganisa Bronze API 150LBS Isango Valve nge-NPT (B ...